Ronono oat legioma | ThermoRecipes
zava-pisotro14 minitraOlona 1 litatra100 kaloria
La ronono oat dia iray amin'ireo tsy mitovy ronono anana izay azo atao ao an-trano ary mankafy ny tombony rehetra. Ny malaza indrindra dia ny horchata ary ronono soja, saingy misy safidy hafa, toy ny ronono voamadinika na voanjo. Anisan'izany, ity zava-pisotro otrikaina, izay mety amin'ny ady amin'ny tebiteby sy stress, manome angovo maharitra sy tsy misy tavy. Manankarena vitamina B izy, mahasoa ny rafi-pitabatabana, ary misy avenin, alkaloida misy vokany mampitony. Izy io dia mety tsara ho an'ny olona na fotoana iasana ary ilain'ny fifantohana ara-tsaina.
Ho fanampin'izany dia manampy amin'ny fihenana kolesterola ary mora ny mandevona. Mety indrindra ho an'ny tsy mahazaka laktazy na tsy mahazaka proteinina omby.
1 Ronono oat
Mety amin'ny ady amin'ny adin-tsaina sy ny famatsiana angovo, ity ronono oat legioma ity dia safidy tsara amin'ny sakafo maraina, indrindra manoloana ny tsy fandeferan'ny lactose.
Fanompoana: 1 litatra
Fotoana hiketrehana: 9M
Fotoana manontolo: 14M
50 g ny voanio mihodina
Kanelina 1 hazo
Atsofohy ao anaty vera ireo flakes oat, ny sira ary ilay hazo kanelina. Torotoro izahay mandritra 10 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 10. Mivoaka izahay ary mitazona.
Mampahafantatra ny rano izahay ary manafana azy 6 minitra, 70º, hafainganam-pandeha 1.
Ampio ny fangaro voatokana ary afangaro mandritra ny fotoana rehetra 2 minitra amin'ny hafainganam-pandeha 4.
Avelao hipetraka ao anaty vera izy io, rakofana ary ampiarahina amin'ilay paiso, mandritra ny 5 minitra.
Ao amin'ny saringan iray dia mametraka gauze lehibe na lamba manify isika ary manaparitaka ny ronono hamakivaky azy. Rehefa tapitra ny sivana amin'ny sivana dia fonosintsika amin'ny gazoala na lamba ny sisa tavela ary tsindrio hamarana ny fisotroana rehetra.
Ary efa vonona. Ankehitriny, havelantsika hangatsiaka izy io ary amin'ny fotoana itondrantsika azy, dia mamy tsiro isika.
Azonao atao ny manandrana azy amin'ny kanelina, toy ny amin'ity fomba fahandro ity, miaraka amin'ny lavanila na miaraka amin'ny hoditr'olomboasary aza, manorotoro azy ireo hatrany amin'ny dingana voalohany amin'ny flakes.
Fanazavana fanampiny - Ahetsiketsika ny ronono voanjo
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Misotro sy ranona, Tsy mahazaka laktose, Latsaky ny 15 minitra, Vegan, tsy mihinan-kena
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » Misotro sy ranona » Ronono oat
gespy dia hoy izy:
Firy andro no haharetany ao anaty vata fampangatsiahana?
Mamaly ny gespy
Salama Gespy. Ny ronono an-trano, tsy misy preservatives, dia tsy maharitra. Ao anaty vata fampangatsiahana sy ao anaty kaontenera mihidy, tokony ho 3 andro.
Vao nanao an'io aho, tena tsara. Hanao andiany hafa aho ary hitondra litatra ho an'ny namana sasany izay mampiasa an'io ronono io ho an'ny kafe. Misaotra anao amin'ny fomba fahandro!
Tena tsara Lis! Misaotra betsaka amin'ny hafatrao, faly izahay fa tianao izany. Fa sambatra ny namanao huh? 🙂
Inona no azontsika atao hanararaotana ireo ambina oats sy kanelina tany? Misy resaka ny fanararaotana azy amin'ny cookies, mofomamy, ... saingy tsy fantatro izay fomba fahandro ary tsy sahy manandrana aho.
Afaka manao sarontava ho an'ny tavanao ianao. Avelao ho maina mandritra ny fotoana fohy eo amin'ny hoditra izy ary esory amin'ny rano mafana na amin'ny rano raozy. Oatmeal dia manana fananana tena tsara amin'ny hoditra.
Salama, aiza ianao no mividy ny oats.
Salama rosa. Ny flakes oat dia efa amidy eny amin'ny supermarket lehibe, manontania amin'ny supermarket mahazatra anao. Raha tsy izany, na amin'ny hypermarket rehetra aza. Ary raha tsy manana fidirana ianao dia ho hitanao fa azo antoka izany na any amin'ireo mpivarotra zavamaniry, fivarotana lehibe na fivarotana sakafo ara-pahasalamana. Mirary soa amin'ny fikarohana nataonao!
Arabo dia hoy izy:
Salama! Efa vitako ihany koa, fa rehefa manafana azy ao anaty vilany dia matevina be dia be, sahala amin'ny volon'ny sôkôla amin'ny kaopy ary tsy mahafinaritra ny misotro toy izao ... Misy fitaka ve hisorohana izany tsy hitranga? Ilay ronono oat izay novidiako tany amin'ny magazay lehibe dia tsy nanatevina ahy velively, raha tsy izany, rehefa ataoko ny bubur (ny buby oatmeal ho an'ny sakafo maraina) dia matevina be izy io. Misaotra anao!
Mamaly an'i arabela
Salama arabela. Ny marina dia tsy mbola nanana hafanana aho, mangatsiaka foana, toy ny horchata. Saingy, tamin'ny zavatra nodinihiko dia hitako fa mihombo tokoa ny ronono oat voajanahary raha hafanaina. Mba hisorohana an'io dia tsara kokoa raha manafana azy mandritra ny fotoana fohy sy amin'ny hafanana ambany ianao, fa tsy mahatratra vay na manodidina ny 100º. Raha manaitra ianao mandritra ny fotoana mahamay kokoa (noho izany, mahafinaritra ny tMX satria azonao atao ny mametraka 60º sy ny hafainganam-pandehan'ny sotro mandritra ny minitra roa) Etsy andaniny, na dia heveriko fa nahavita azy ianao dia ilaina ny manentsina azy ny gauze fa tsy amin'ny saringan. Andao hojerentsika raha toa ka miasa ho anao ny misotro azy mafana. Oroka!
Salama, tena liana amin'ity fomba fahandro ity aho, amin'ny maha-atleta ahy. Ny fanontaniako dia raha tsy 50gr. Azoko atao ve ny mametraka 100g isaky ny litatra?, Ary amin'izany manararaotra bebe kokoa ny fananana oats. Mirary ny soa indrindra
Salama Jose. Hery, azonao atao. Fa tsy hahazo ronono oat intsony ianao, fa crème oatmeal, raisina amin'ny sotro. Famihinana!
misaotra amin'ny hafainganana, hitahiry ny 50gr aho. Aleoko misotro.
Bilaogin'i Eli's Beauty dia hoy izy:
Omaly no nanomanako azy ary tena matevina izy io, tsy afaka hosivina amin'ny lamba, ary miaraka amina firafitra gelatinous Heveriko fa tsy maintsy hatsipiko io ... Tena nilaina ve ny nanafana ny rano?
Valio ny bilaogin'i Eli's Beauty
Salama The Beauty. Tsy ara-dalàna ny nahatonga anao ho toy izao, tsy izany mihitsy. Tsy maintsy nisy ny lesoka tamin'ny habetsahan'ny oatmeal. Ny ambaratonga thermomix dia marefo ary indraindray tsy mahomby (raha tsy mihombo tanteraka izy io, raha tery loatra ny tariby dia mety hisy vokany eo aza fa misy potipoti-mofo vitsivitsy ambanin'ny tongony ... ary, marefo be izy). Saika tsara kokoa ny milanja misaraka, na ny mametraka fitoeran-javatra eo amin'ny sarony, apetaho amin'ny zero ny mizana ary ny lanjany ho lanjaina ao anaty kaontenera. Misoroka ireo karazana tsy fahombiazana ireo. Raha ilaina ny manafana ny rano, eny, eny, tena ilaina tokoa, raha tsy izany dia tsy vita ny ronono. Andramo amin'ny manaraka dia ho hitanao ny vokany. Ny olana amin'ny mihamatevina, araka ny ho hitanao amin'ny hevitra hafa, dia tsy rehefa vita ny ronono, fa rehefa manafana azy indray mandeha dia vita. Mikasika ilay noforoninao, raha sahy ianao dia azonao ampiharina ho sarontava tarehy, manana toetra lehibe izy io. Famihinana!
Salama! Notononinao ny tokony hatao amin'ny paty tavela rehefa manamboatra zava-pisotro legioma ianao; Antsoina hoe "okara" izy io, ary raha mikaroka amin'ny Internet ianao dia hahita fomba fahandro marobe: cookies, croquette legioma ...
Ohatrinona ny A Vena sy rano tsy maintsy apetrako mba hivadika ho toy ny amidy am-pivarotana lehibe? ????
Ary milaza fa tsy apetrako aminy izay mitranga ?????
Salama Encarni. Ny recette omeko anao dia somary matevina kokoa noho ilay amidy amin'ny fivarotana lehibe. Fa ny ronono oat voajanahary dia toy izany. Raha tadiavinao fa mazava kokoa io, raha vantany vao vita, dia manampy rano ianao ary mampihetsika. Fa andramo aloha toa izao, tena matsiro ary mahamenatra ny manazava azy.
Mikasika ny mangotraka dia tsy azoko ny fanontanianao. Amin'ny resipeo dia tsy mahamontsina amin'ny fotoana rehetra. By fi, avereno jerena kely ilay hevitra alohan'ny handefasanao fa nataonao lasa adala aho tamin'ny fehezanteny farany, oroka, tsara tarehy.
Jeni dia hoy izy:
Salama tsara! Misaotra anao amin'ny fomba fahandro! Mampiasa azy isan'andro aho! Zavatra kely ... Mba hahatonga ny roa litatra hanaja ny fotoana?
Valiny tamin'i Jeni
Tena tsotra dia tsy hampitombo ny fotoana amin'ny dingana fotsiny ianao. Afanaina hatramin'ny 70º ny rano, mino aho fa afaka 10 minitra dia efa nahatratra ny maripana izy. Raha tsy izany dia tantano mandritra ny minitra roa hafa.
Ny ambiny dia mitovy daholo.
Irina Sanz dia hoy izy:
Salama! Tiako ity zava-pisotro ity, namboariko ihany ... nasiako vanila sy stevia kely koa ... mahafinaritra tokoa ny misotro azy rehefa mandeha ...?
Valiny tamin'i Irina Sanz
Aza adino fa amin'ny okara avy amin'ny oats dia azonao atao ny manamboatra cookies na manankarena fomba fahandro hafa.
ISABELA dia hoy izy:
Salama. Raha manompo anao izy. Ataoko amin'ny alàlan'ny famelana ny oatmeal hiala amin'ny rano, ny voasarimakirana sy kanelina (manarona azy fotsiny) mandritra ny alina. Arotsako amin'ny saringan ny maraina, araraka ny rano voalohany. Apetrako ao anaty vera ny paty miaraka amina sira kely, lavanila ary eranà sotrokely solika (siramamy volontany tsy voatery) amin'ny hafainganam-pandeha 4 mandritra ny 2 minitra ary avy eo ampiako ny rano mangatsiaka litatra ary apetrakao 1 minitra hafainganam-pandeha 10. Sakano izany amin'ny sivana kafe lamba ary ataovy ao anaty vata fampangatsiahana.
Valiny amin'i ISABEL
Blanca ruiz dia hoy izy:
Ahoana ny fampidirana calcium ao amin'ity ronono ity
Valiny tamin'i Blanca ruiz
Ny marina dia tsy haiko. Azonao atao ny mameno ny fihinanana calcium amin'ny sakafo hafa ao anaty sakafo na mangataka amin'ny fivarotam-panafody raha mivarotra famenon'ny kalsioma ranoka izy ireo (taona maro lasa izay no amarotany izany amin'ny tavoahangy)
Salama, hanandrana hahavita azy aho androany, fa te-hanontany zavatra iray, azoko atao ve ny mandingana ny dingana famintinana azy? Satria ampiako amin'ny ronono matetika ny oaka mihodina, amin'ity tranga ity dia tsy ilaina intsony izany, sa tsy izany? Ary araraotiko ny zava-drehetra. Misaotra anao.
Andramo araka ny voalazanao, raha hitanao raha tianao izany. Raha manana oatmeal ianao any aoriana, amin'ny ronono dia tsara fa tsy hosivaninao.
Efa vitako io, nataoko omaly ary tiako ilay izy, nataoko malama ho an'ny akondro vaovao aho, nataoko tamin'ny hoditry ny voasary. Misaotra.
Ie, nataoko ihany ary ao anaty vata fampangatsiahana miandry azy hangatsiatsiaka, efa nanandrana aho alohan'ny hametrahana azy mbola mafana ary matsiro be !!!!! Heveriko fa ho tonga mpisolo toerana tsara ny tsakitsaky ka efa reraky ny kafe sy dite be dia be aho, zavatra mahasalama sy mangatsiaka kokoa!
Fifaliana re Cristina !! Faly be izahay, misaotra anao nanoratra taminay !! 🙂
Misaotra betsaka noho ny recette hataoko ary inona no lazainao fa tsy misy kanelina ary tena tsara.
medea dia hoy izy:
Efa nanandrana ny fomba fahandro rehetra momba ny ronono oat nandritra ny herinandro aho ary tsy nisy naharesy lahatra ahy fa nanaraka ny anao aho tamin'ilay taratasy ary zavatra roa no nitranga tamiko. Ny voalohany dia rehefa notorotoroiko ny flakes oatmeal sy kanelina tamin'ny dingana voalohany dia nanana vovoka aho, oatmeal izay efa nahatonga ahy hiahiahy fa tsy ho vita mihitsy ny fihenjanana. Farany misy sosona mijanona eo amin'ilay lamba izay tsy mamela ny rano hamakivaky, ary mahasosotra ny manandrana manala azy, saika nanamboatra ahy ny nanorotoro ny zava-drehetra tamin'ny farany ary nisotro azy, na nihinana azy, tsy omeko tsy haiko ...
Ny zavatra faharoa dia marefo be izy io, tsy ny firafitry ny ronono fa ny gelatinous, fantatro fa ny mucilage an'ny oats izy io, saingy tsy mihalefaka na dia manampy rano bebe kokoa aza aho, dia toy ny rano maloto misy tsiranoka moka eo afovoany. Tena toa izao ve ary afaka misotro azy? Mieritreritra aho fa manipy lamba famaohana ao anaty ronono oat ... raha manana torohevitra ianao dia tiako izany
Mamaly an'i medea
@irenegonser dia hoy izy:
Medea, efa zatra manao ronono legioma aho. Mba tsy hampatevina anao dia alemana anaty rano aloha ny oatmeal, farafahakeliny 20 minitra na alina iray. Avy eo atsofohy ny oatmeal ary eo ambanin'ny riaka dia sasaoo amin'ny saringan mba hialana amin'ny mucilage araka izay tratra. Avy eo nokapohina tamin'ny rano, kanelina, sns, ny trondro. Miaraka amin'ny rano mangatsiaka. Sakano amin'ny fantsom-boaloboka tsara sy cheesecloth eo amboniny ary tsy hihamafy izy io. Aleo kapohina amin'ny rano amin'ny fotoana sy tsy misy fanafanana, satria miankina amin'ny hafanana dia matevina na tsia. Raha mametraka oatmeal kely ianao dia hihena kokoa rehefa mihamafana. Ny ronono oat dia azo hafanaina amin'ny fomba fahandro tena vitsy, arakaraka ny isan-jaton'ny oats. Misotro mafana, tsara kokoa ny manamboatra ronono amandy. Mirary ny soa indrindra
Mamaly an'i @irenegonser
Tena tsara ity recette ity, efa ela no nanamboarako azy ary tsy nasiako siramamy satria ampiarahako ny kanelina sy ny voasarimakirana.
Ny fomba fahandro azy dia tsy misy siramamy fa tianay ny fifangaroanareo amin'ny hanitra kanelina sy voasarimakirana.
Andramo koa ny volomboasary raha tsy mikasika hafa ianao.
Amandy nendasina ao amin'ny Thermomix